बैबाहिक जीवन सफल हुनको लागी श्रीमान श्रीमतीको उमेरको अन्तर कति हुनु पर्छ ? थाहा पाइराखौ ! – Sandesh Press
May 23, 2021 410
काठमान्डौ : हाम्रो नेपाली समाजमा श्रीमान भन्दा श्री’मतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धाराण रही आएको छ । युवतीहरु पनि आफू भन्दा बढि उमेरको, आफू भन्दा परिपक्क होस् भन्ने चाहन्छन् ।युवतीहरु पनि प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा आफू भन्दाबढि उमेरको प’रुषसँग नै गर्न चाहन्छन् । किनभने युवतीहरु पुरुषबाट सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षाका साथै आफ्नो श्रीमान परिपक्क होस् भन्ने चाहन्छन् ।
यसका साथै नेपाली समाजमा श्रीमानको भन्दा श्री’मतीको उमेर कम हुने गरेको पाइन्छ । सायदै कमै होलान् जो श्रीमान र श्रीमतीको उमेर बराबर भएकाहरु, प्रायजसो श्रीमानको भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुन्छ ।कसैमा २ वर्षको अन्तर हुन्छ त कसैमा १० वा सो भन्दा माथी । यस्तो किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य जीवनमा केही असर पार्छ ।
वैवाहिक जीवन सुमधुर बनाउन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुस्..
बिहे यस्तो सम्बन्ध हो, जसमा श्रीमान श्रीमतीबीच विशेष तालमेल हुन जरुरी छ । तसर्थ तालमेल मिलाउनका लागि व्यक्तिको व्यवहार,कार्यशैली , सोच,चिन्तन,ढंग आदि सबै कुरामा तालेमल मिल्नु पर्छ ।
अत : तालमेल मिलाउनका लागि उमेर मिल्नु पनि आवश्यक रहन्छ । जस्तै कि एकजना परिपक्क र अर्को कच्चा छ भने तिनीहरुबीच खास तालमेल हुन सक्दैन ।जर्जिया एटलान्टाको एमोरी युनिभर्सिटीका अध्ययनकर्ताका अनुसार ति दम्पती जसको उमेर एक वर्ष भन्दा कम हुन्छ । उनीहरुको दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन्छ साथै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने संम्भावना पनि अत्यन्तै कम हुन्छ ।
बिहेपछि किन माेटाउछन् युवतीहरु ? यस्ताे छ कारण !
अध्ययनका अनुसार जुन दम्पतीको उमेर ५ वर्षको अन्तर छ भने, उनीहरुको बिछोड हुने सम्भावना १८ प्रतिशत रहन्छ । यसका साथै १२ वर्ष भन्दा बढि उमेर अन्तर छ भने सम्बन्ध विच्छेद हुने सम्भावना अधिक मात्रा रहन्छ ।
अत श्रीमान श्रीमती बीच जति धेरै उमेर अन्तर हुन्छ,त्यति नै सम्बन्धमा खटपट आउने सम्भावना बढि हुन्छ ।त्यसैले दाम्पत्य जीवन सुखका लागि श्रीमान श्रीमतीको उमेर अन्तर कम हुनुपर्छ ।
Prevअर्थोपेडिक सर्जन डा. मुराद हुसेनको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट निधन
बलिउड बाट अस्ताए अभिनेता राजकिरण